Costa Rica Nsrahwɛ | Nsase ne Nnipa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Costa Rica Nsrahwɛ
BƐYƐ mfie 500 a atwam nie na Spainfoɔ dii kan kɔɔ hɔ. Ná wɔsusu sɛ wɔbɛnya sika kɔkɔɔ pii wɔ hɔ, nti wɔtoo hɔ din Costa Rica (anaa “Sika Mpoano”). Sika a na wɔsusu sɛ wɔbɛnya no, wɔanya. Ɛnnɛ, yɛnim ɔman yi sɛ baabi a mmoa ne afifide ahodoɔ pii wɔ, ɛnyɛ baabi a sika kɔkɔɔ wɔ.
Abodin a wɔde frɛ Costa Ricafoɔ ne Ticofoɔ, efisɛ wɔtaa de “-ico” sɔ nsɛmfua bi so. Ɛho nhwɛsoɔ nie: Sɛ wɔpɛ sɛ wɔka sɛ “un momento” (seesei ara) a, wɔbɛka sɛ “un momentico” (kyerɛ sɛ seesei yi ara). Sɛ obi yɛ biribi na wɔgye tom anaa wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ ho anisɔ a, wɔka sɛ “¡pura vida!” (ɛyɛ ma wo!). Wɔka saa nso de kyerɛ “nante yie.”
Nnua ne mmoa ahodoɔ pii wɔ Costa Rica kwaeɛ mu. Emu bi ne apɔtorɔ a n’ani kɔɔ a ɔda dua so yi (Agalychnis callidryas)
Aduane bi a Costa Ricafoɔ pɛ paa ne gallo pinto. Aduane yi din ase ne “akokɔ kyɛk-kyɛk” anaa “akokɔ a ne ho asisi.” Aduane yi yɛ ɛmo ne adua a wɔde atomdeɛ afra. Costa Ricafoɔ tumi di Gallo pinto anɔpa, awia, anaa anwummerɛ. Wɔwɔ kɔfe bi nso a wɔpɛ paa. Wɔfrɛ no café chorreado. Ɛyɛ kɔfe a wɔhyɛ da noa sɔne so wɔ fie.
Yehowa Adansefoɔ asafo bɛyɛ 450 na ɛwɔ Costa Rica. Wɔyɛ wɔn adesua wɔ kasa du mu. Emu bi ne Bribri ne Cabecar ne Costa Rica Mum Kasa.
WONIM? Sɛ wokɔ Costa Rica a, wobɛhu aboɔ akɛseakɛseɛ a wɔasene no nkuruwankuruwa pii. Nea ɛso paa no sini anim bɛyɛ sɛ mita mmienu ne fã. Wɔkyerɛ sɛ aboɔ yi bi adi bɛboro mfie 1,400, na obiara nhyɛ da nnim nea enti a wɔsenee aboɔ no saa!
Emu nnipa dodoɔ: 4,878,000
Ahenkuro: San José
Kasa titire: Spanish
Asase: Mpoano asase da fam; mmepɔ wɔ afã bi
Aban: Demokrase amammuo
Nsɛm yi mu nea ɛwɔ he na wobɛka afa Costa Rica ho?
A. Ɛka aman a emu nnipa dodoɔ no ara nim nwoma paa ho
B. Ɔman a wɔwɔ asraafoɔ akukudam
D. Supɔ bi wɔ hɔ a nnipa adi hɔ akɔneaba bɛboro mpɛn 500 sɛ wɔbɛnya fagudeɛ
Mmuaeɛ: A ne D. Asɛm a ɛwɔ D no fa Cocos Island ho. Ɛwɔ Costa Rica atɔeɛ fam, na ɛne Costa Rica ankasa ntam yɛ kilomita 560.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan NYAN! January 2015 | Ɛyɛɛ Dɛn na Nkwa Baeɛ?